သံမဏိ multistage centrifugal စုပ်စက်များအတွက်တပ်ဆင်ခမှတ်စု - တရုတ်ရှန်ဟိုင်း SOG pump
အဆိုပါတပ်ဆင်ခြင်းသံမဏိ Multistage centrifugal Pump အဘို့အမှတ်ချက်ပြု:
အဆိုပါသံမဏိ multistage centrifugal စုပ်စက်တပ်ဆင်မှုနည်းပညာ မှစ. 1. သည်စုတ်ယူခြင်းပိုက်မဟုတ်ရင်ကဘုံဘိုင်ရေကို output ဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း, ဘုံဘိုင်ရေဝင်ပေါက်မှာလေဟာနယ်ဒီဂရီဖျက်ဆီးမည်, တစ်ဦးတင်းကျပ်သောတံဆိပျကိုအခွအေနေရန်လိုအပ်သည်, ပိုက်ယိုစိမ့်သို့မဟုတ်ယိုစိမ့်ရှိသည်မဟုတ်နိုင်ပါတယ် လျှော့ချ, သို့မဟုတ်ပါကရေခပ်ဖို့အရမ်းလေးနက်မည်။ ထို့ကွောငျ့ကြှနျုပျတို့သစိတ်အားထက်သန်စွာပိုက်လိုင်းဆက်သွယ်မှုများ၏ဆောက်လုပ်ရေးအရည်အသွေးကိုသေချာစေရန်ပိုက်လိုင်း၏ interface ကိုတစ်ဦးအလုပ်ကောင်းပြုရမည်။
ဒါဟာဒေသခံမြင့် 300 ကျော်မီတာဒါမှမဟုတ် pumped ရေအပူချိန် 20 ထက်ကျော်လွန်လျှင်တဲ့အခါမှာဦးခေါင်းနှင့်သံမဏိ multistage centrifugal စုပ်စက်နှင့်ပိုက်လိုင်း centrifugal စုပ်စက်တပ်ဆင်၏ရေအပူချိန်, စမ်းသပ်အခြေအနေများကနေမတူညီတဲ့ဖြစ်ကြောင်း 2. ထောက်ပြရပါမည် စင်တီဂရိတ်ဘွဲ့, ထိုတွက်ချက်တန်ဖိုးကိုတညျ့ရလိမ့်မည်။ ရေကိုအပူချိန် 20 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအခါအကြောင်း, ကွဲပြားခြားနားသောမြင့်တက်မှာလေထုဖိအားနှင့် 20 ဒီဂရီ Celsius.However ရေအပူချိန်အထက်ပြည့်နှက်ငွေ့ဖိအားဖြစ်ပြီး, ယင်းပြည့်နှက်ရေနွေးငွေ့ဖိအားမှုမရှိခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
3. စုပ်စက်တပ်ဆင်မှုအမြင့် (ဆိုလိုသည်မှာစုတ်ယူခြင်း) ကိုအတည်ပြုပေးရန်။ ဤသည်အမြင့်ကိုရေမျက်နှာပြင်အကြားဒေါင်လိုက်ကြားကာလနှင့်စုပ်စက်လှုံ့ဆျော၏ဗဟို-line ကိုရည်ညွှန်းသည်။ ဒါဟာအိုင်အိုဒင်းစုတ်ယူခြင်းအမြင့်နှင့်အတူရောထွေးမရရမည်ဖြစ်သည်။ ရေကိုစုပ်စက်ထုတ်ကုန် elucidation စာအုပ်သို့မဟုတ် nameplate အပေါ်ခွင့်လေဟာနယ်အမြင့်ကိုရေစုပ်စက်၏ဝင်ပေါက်အပိုင်းမှာလေဟာနယ်တန်ဖိုးကိုဖော်ပြသည်။ ဒါဟာသာမန်လေထုဖိအားနှင့် 20 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တစ်ရေအပူချိန်အောက်၌စမ်းသပ်မှုရပ်တန့်ခြင်းဖြင့်တိုင်းတာခဲ့သည်။ အဆိုပါစုတ်ယူခြင်းပိုက်လိုက်ဖက်ပြီးနောက်ဒါဟာရေစီးဆင်းမှုကိုစဉ်းစားမထားဘူး။ အဆိုပါစုပ်စက်ယူနစ်များ၏အမြင့်လေဟာနယ်အမြင့်ဟာစုတ်ယူခြင်းပိုက်၏စုတ်ယူခြင်းလိုင်း၏အရှုံးအပြီးနုတ်ယူခံရဖို့ခွင့်ပြုပြီးနောက်ကျန်ရှိသောဒေသခံတန်ဖိုးကိုဖြစ်သင့်သည်။ အဆိုပါစုပ်စက်ယူနစ်များ၏အမြင့်ကတော့တွက်ချက်တန်ဖိုးကိုထက်မပိုနိုင်ပါ။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်, ရေစုပ်စက်တက်စုပ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
4. တွက်ချက်တန်ဖိုးကို၏သက်ရောက်မှုကြောင့်စုတ်ယူခြင်းပိုက်၏ပိုက်ခုခံဖို့ဦးခေါင်း -loss ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်အတိုဆုံးပိုက်အစီအစဉ်ချမှတ်နှင့်တတ်နိုင်သမျှအတိုင်းတံတောင်ဆစ် fittings install လုပ်ဖို့အကြံပြုလိုတယ်။ ဒါဟာသင့်လျော်စွာယင်းပိုက်ထဲမှာစီးဆင်းမှုနှုန်းကိုလျှော့ချရန်အချို့သော caliber နှင့်အတူပိုက်စီစဉ်ဖို့လည်းစိတ်ကူးဖြစ်ပါတယ်။